Akụkọ - Guangxi Cummins gara Bonny Heavy Machinery
Guangxi Cummins gara Bonny Heavy Machinery
Kemgbe mmalite nke ọrịa COVID-19, akụ na ụba ụwa niile enweela nnukwu mmetụta, Ọzọkwa ụlọ ọrụ na-emepụta igwe na-ewu ihe na-eche ule a na-enwetụbeghị ụdị ya ihu.2021 ga-abụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike, Bonny meriri ugwu nke ihe isi ike, n'ọnọdụ ọrịa na-efe efe, anyị.onye na-egwuputa ihe,ihe eji eme ihenamkporisịnwetakwara nsonaazụ mara mma, ọkachasịihe eji eme ihenwetara ọmarịcha ihe ịga nke ọma n'ahịa mba ụwa ma e jiri ya tụnyere 2020. Nsonaazụ dị mma enwetara enweghị ike ikewapụ ya na nkwado nke ọtụtụ ndị na-ebubata ya, dị ka onye na-eweta akụrụngwa anyị, Cummins.
Na nso nso a, onye isi njikwa, onye njikwa ahịa na onye injinia ngwa nke ụlọ ọrụ Guangxi Cummins, onye isi njikwa nke alaka Chengdu bịara na ụlọ ọrụ anyị.Enwere mkparịta ụka miri emi banyere imekọ ihe ọnụ n'etiti akụkụ abụọ ahụ na ọganihu mmepe nke ụlọ ọrụ n'ọdịnihu. N'oge nzukọ ahụ, onyeisi oche nke ụlọ ọrụ ahụ webatara akụkọ mmepe nke Bonny Heavy Machinery maka ihe karịrị afọ 50 na ọnọdụ ọrụ na mmepụta ihe ugbu a. nyochaa ahụmahụ imekọ ihe ọnụ gara aga na onye isi njikwa Cummins, bụ onye kwadoro àgwà ngwaahịa na arụmọrụ nke Bonny Heavy Machinery. Mgbe mmeghe nke ụlọ ọrụ anyị gasịrị, onye njikwa ahịa nke Cummins ka na-eduzi ihe ngosi dị mkpirikpi banyere ụlọ ọrụ ha, wee bịa na ya. na "Non-road mobile machinery phase IV standards" nke ga-eme na December 1, 2022. N'akụkụ abụọ ahụ kwetara na anyị kwesịrị ịmara nke ọma maka iwu na ụkpụrụ ọhụrụ, na-emegharị na nkà na ụzụ ọhụrụ maka ụkpụrụ IV, kwalite. ọzụzụ maka onye na-ere ahịa na mgbasa ozi maka ndị ahịa nke mere na mgbanwe dị mma site na nke atọ ruo na nke anọ.
Mmekọrịta dị n'etiti Cummins na Bonny Heavy Machinery bụ ihe pụrụ iche.Nzukọ mgbanwe a mere ka mmekọrịta ahụ dịkwuo mma ma dozie ọtụtụ nsogbu n'etiti akụkụ abụọ ahụ.N'ọdịnihu, Bonny Heavy Machinery ga-agbasawanye ọwa imekọ ihe ọnụ na Cummins na teknụzụ ọhụrụ, na-etinye ntọala siri ike maka imekọ ihe ọnụ nke akụkụ abụọ ahụ iji zụlite uru asọmpi ọhụrụ ma welie ikike nke nhazi usoro.